2011 – Year – Channel Myanmar
Painted Skin (2011) လှည့်စားတတ်တဲ့အချစ်... အသုံးချတတ်တဲ့အချစ်... အဲ့ဒီအချစ်ရဲ့ထိတွေ့မှုတွေကို ခံစားလိုက်ရတဲ့သူတွေရဲ့အကြောင်း ဇာတ်အိမ်ခိုင်ခိုင်နဲ့ဖွဲ့တည်ထားတဲ့ Painted Skin စီးရီးလေးလာပါပြီဗျာ... အပေါ်ယံအရေပြားကို သာယာကြတာလား? အတွင်းစိတ်ရဲ့ဖြူစင်မှုကို နှစ်သက်မြတ်နိုးတာလား? ဒါတွေကိုမဝေခွဲတတ်တဲ့လူသားတွေဆီကို မြေခွေးမိစ္ဆာလှလှလေးက တံခါးလာခေါက်ပါလိမ့်မယ်။ သူ့ကိုချစ်လာအောင်လုပ်ပြီးမှ ထိုသူရဲ့နှလုံးသားကိုသုံးဆောင်ပါတော့တယ်... ဘာအတွက်လဲဆိုတော့ အဲ့ဒီလှပတဲ့အရေပြားအတွက်ပဲပေါ့ လှပတဲ့အရေပြားတစ်ခုအရင်းပြုပြီး လူ့နှလုံးတွေစားလာလိုက်တာ သူ့ရဲ့အသက်သခင်ကျေးဇူးရှင် ဝမ်စန်းနဲ့ပြန်တွေ့ချိန်မှာ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေပြန်လည်ရှင်သန်လာပါတော့တယ်။ ဒါပေမဲ့ မေတ္တာရေးမှာကံမကောင်းခဲ့တဲ့ မြေခွေးမလေးခဗျာ ဒီတစ်ခေါက်အချစ်နဲ့ပြန်တွေ့တော့လည်း ဆိုင်သူပိုင်သူရှိနေလေတော့.... များပြားလှတဲ့ သံယောဇဉ်နှောင်ဖွဲ့မှုတွေကြား လူသားနဲ့မိစ္ဆာ ဘယ်လိုအားပြိုင်ကြမလဲဆိုတာတွေကို အလောင်တစ်လိုင်းဖြစ်တဲ့ ဒီစီးရီးလေးမှာ ကြည့်ရှုလိုက်ပါတော့နော်.... File Size - 400mb (episode)Quality - 720p web-dlSubtitle - BurmeseTranslator Fix - JoJoVaEncoder - Thit San Khant Download List - CM VIP LinkEP 01 - Yosteshin / Usersdrive / Megaup / Datbu / Streamsb / Telegram (400mb)EP 02 - Yosteshin / Usersdrive / Megaup ...
Empresses In The Palace (2011) ( Completed ) Chinese Historical Drama Palace ကားတွေကိုကြိုတ်နှစ်သက်ကြတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့Yanxi palace နဲ့ Ruyi Royal loveတို့နဲ့စိမ်းမယ်မထင်ပါဘူး။၂၀၁၈ တုန်းကထွက်ပြီး အပြိုင်နာမည်ကြီးခဲ့ဲ့တဲ့ ဒီ၂ကားပြီးသွားတဲ့နောက်တော့နောက်ထပ် မန်ချူးခေတ်ဇာတ်အိမ်တည်ထားပြီးအနောက်နန်းဆောင်ကြားမှမိဖုရားတွေရဲ့အာဏာလုတဲ့ဇာတ်လမ်းတွေကို ကြည့်ချင်တဲ့ပရိသတ်တို့အတွက်နောက်ကားကောင်းလေးတစ်ခု တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီကားကတော့ အပေါ်က ၂ကားရဲ့ ရှေ့ကားလို့ပြောလို့ရပါတယ်။yanxi နဲ့ ruyi ကားကိုကြည့်ဖူးတဲ့သူတွေကတော့အဲ့ကားထဲမှာပါတဲ့ ဘုရင်ရဲ့မယ်တော်ကြီးကိုမှတ်မိအုံးမယ်ထင်ပါတယ် ။ဟုတ်ပါတယ် အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်ကားကတော့ သားတော်နဲ့မြေးတော်နှစ်ယောက်စလုံးရဲ့ခေတ်ကို မီရုံမက လူတွေရဲ့လေးစားသမှုခံရပြီးအာဏာရှိခဲ့တဲ့မန်ချင်းခေတ်ရဲ့အသက်အရှည်ဆုံး ဧကရီမယ်တော်ကြီးနညိုဟူရု အကြောင်းရိုက်ထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီကားဟာ သမိုင်းမှာတကယ်ကိုရှိခဲ့တဲ့ ချင်လုံဧကရာဇ်ရဲ့အမေဧကရီမယ်တော်ကြီးအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။Lui lainziရေးသားခဲ့တဲ့ The legend of zhen huan ကိုအခြေတည်ပြီးရိုက်ပြထားတာကြောင့်တကယ့်သမိုင်းအစစ်မဟုတ်ပေမယ့် အင်မတန်မှကြည့်ကောင်းပြီးကြည့်ရတာတန်စေမယ့်ကားကောင်းလေးတစ်ခုဆိုလည်းမမှားပါဘူး။Rating အနေနဲ့ 8.3 /IMDbရထားပြီး 2015မှာ Netflix ...
Empresses In The Palace (2011) ( Completed )